I-Chardonel-Yonwabela iiJongo zeSidiliya
Ikhaya elitsha eliNcinci elineembono zeSidiliya. Ungonwabela ubusuku obuzolileyo ngaphakathi okanye uhlale ngaphandle kwidesika enkulu kwaye ujonge iinduli eziqengqelekayo. Ufuna ukuphuma kwaye malunga, thatha uhambo olufutshane ukuya kwinkonzo epheleleyo yeWinery kunye neRestaurant. Ndwendwela enye yeebhulorho ezigqunyiweyo zembali. Chitha usuku eCave Run Lake. Thenga kwenye yeevenkile ezininzi zakudala zalapha. Yiza undwendwele indawo yethu ekhethekileyo yosapho !!!
Yolisa kwaye usele iwayini-zisa usapho lwakho kunye nabahlobo ukuba banandiphe ukuhlala okuthe kratya kumakhaya ethu amancinci aneembono ezintle kanye kumnyango wakho wangaphambili! Umgama nje omfutshane ukuya kusapho lwethu lweWinery kunye neRestaurant egcwele ukutya okumnandi, iwayini kunye neebhiya ... oh kwaye sikhankanye izimuncumuncu zasekhaya?
Yonwabele iinduli eziqengqelekayo zengca eluhlaza kwifama yethu ezolileyo, kodwa ukuba ujonge indawo yokuhlala esixekweni-sikuhambo olufutshane ukusuka kumbindi-iLexington kunye neCincinnati zonke zimalunga neyure yokuhamba ukusuka efama!
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nombuki zindwendwe ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngexesha lokuhlala kwakho.